Etu esi emekọrịta ọbá akwụkwọ egwu YouTube na gam akporo Auto | Gam akporosis
Ngwa ngwa gam akporo gam akporo na-amalite iji ọtụtụ ojiji N'ịbụ ebe etiti ọtụtụ, ọ dabara adaba mgbe ị na-anya ụgbọ ala gị. Site na ya ị nwere ike iji ngwa dịka Google Maps, Waze, Spotify, YouTube na ọtụtụ ndị ọzọ dị na ndabara.
Otu n'ime ihe ndị ahụ anyị nwere ike ihe atụ bụ mekọrịta YouTube Music n'ọbá akwụkwọ na gam akporo Auto, iji tinye ndepụta ahụ nke anyị meworo. Anyị nwere ike ịgbakwunye egwu anyị chọrọ na listi ọkpụkpọ iji nwee egwu dị iche iche mgbe niile na mgbakwunye na ụdị anyị chọrọ, ọ ga-abụ mmapụta, nkume, flamenco ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Enwere ike ịgbakwunye egwu mgbe e mesịrị, ya mere, ihe mbụ bụ mmekọrịta nke egwu anyị kachasị amasị anyị iji nwee ike iji ya mgbe anyị na-abanye n'ụgbọala. Gam akporo Auto bụ ọrụ dị mkpa Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta GPS vitaminized, ebe ọ na-enye ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ karịa otu.
Ihe mbu na ihe di nkpa bu inweta ngwa gam akporo Auto, enwere ya n'efu na freelọ Ahịa Google ma dabara adaba maka ọtụtụ ngwaọrụ. Naanị budata ma wụnye ya ma hazie ihe ndị bụ isi maka ojiji ya, ọkachasị iji ngwa ndabara.
Ka mmekọrịta gị YouTube Music n'ọbá akwụkwọ na gam akporo Auto, cheta na imepụta ọbá akwụkwọ gị na mbụ, maka nke a ị pụrụ ịhụ na video kere nke Francisco Ruiz (@Pakomola). Nzọụkwụ ndị a bụ iji hazie ọrụ YouTube yana gam akporo Auto:
Ẹkedori na gam akporo Auto ngwa na ekwentị mkpanaaka gị
Pịa na ekweisi akara ngosi ma họrọ YouTube Music
Ugbu a, ọ ga-ekwe ka ị họrọ «Library» Ọ bụrụ na ị mepụtara ya, pịa na ya wee nwee ike ịhọrọ listi ọkpụkpọ ahụ, mana ọ na-enyekwa gị nhọrọ nke Albums, Songs na Artists, iji chọọ egwu ndị ahụ kacha amasị.
Gam akporo Auto na-enyekwa anyị ohere ịhazi ya site na mbido ruo na njedebe na ntọala ya, na nke a nhazi Francisco Ruiz ga-abụ ihe ndị a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ọtụtụ uru na ya. Nhazi ahụ ga - abụ ihe ndị a:
Mepee gam akporo Auto ọzọ wee pịa ntụpọ atọ iji nweta nhọrọ wee pịa Ntọala
Inye n'ime "General" pịa na "hazie ngwa menu" ma họrọ ngwa ndị ahụ ịchọrọ iji gam akporo Auto, hapụ YouTube Music dị ka ọrụ Gụgharia yana ndị ị ga - eji, hapụ ọrụ rụọ ọrụ "malitegharịa ọdịnaya dị na akpaghị aka"
Na ificationsma Ọkwa hapụ "Lee natara ozi", "Gosi nkwuputa ozi" na "Gosi nkwupute ozi otu"
Ahapụ “Akpaaka mbido” rụọ ọrụ nke mere na ọ ga-ejikọ Bluetooth nke ụgbọ ala gị maka ojiji ọ bụrụ na ị nwere ya
Na ihuenyo na, ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-eji ụgbọ ahụ ọtụtụ, mee ka nhọrọ ahụ rụọ ọrụ "N'oge ị na-akwụ ụgwọ"
Nke ige egwu na ugbo ala, ikwu okwu na ekwentị ma ọ bụ chọọ ụzọ ihe dị mma bụ iji gam akporo Auto site n'inwe ya niile n'otu ngwa. Ojiji ya dị mfe ma bụrụ nke a na-ahazi nke ndị na-eji ya kwa ụbọchị iji gaa otu isi, gaa ogologo njem ma ọ bụ ụzọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi emekọrịta ọba akwụkwọ egwu YouTube na gam akporo Auto
Xiaomi na-aga n'ihu ịbụ onye nrụpụta nke na-ere ọtụtụ mobiles na Spain, na ihe ijuanya na OPPO!